Canonical chọrọ enyemaka gị iji melite Ubuntu | Site na Linux
Canonical chọrọ enyemaka gị iji melite Ubuntu
Canonical, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkesa Ubuntu a ma ama, ebipụtala nghoputa iji gbaa obodo ume ịtụnye aro na echiche ya mere mbupute nke ọdịnihu gị dị mma karịa nke ugbu a.
Na aha otutu Focal Fossa, Ubuntu 20.04 ga-abụ nsụgharị LTS ọzọ (site na nkwado ogologo oge) nke nkesa Ubuntu, yana ụbọchị mwepụta maka Eprel 2020.
Mmepe Ubuntu 20.04 malitere na Ọktọba gara aga ma na-ewu kwa ụbọchị maka ule ọha na eze, mana ugbu a Canonical chọrọ ka obodo niile tinye aka site na ime Ubuntu 20.04 LTS ụdị nke nrọ ha, yana ịme ụzọ maka nsụgharị ka mma maka ọdịnihu.
Were nyocha Ubuntu 20.04 LTS nke gọọmentị ugbu a
Ntọhapụ nkwado Ubuntu niile na-abụ ebumnuche bụ isi maka Canonical n'ihi na a na-akwado ha maka afọ 10, yabụ ndị mmepe chọrọ ijide n'aka na Ubuntu 20.04 LTS zuru oke.
Maka nke ahụ, ha jụrụ ndị obodo Ubuntu, yana ndị ọrụ ọ bụla na-eji nkesa Linux, zaa nyocha nke dị n'etiti minit ise na iri.
Canonical kwuru nke ahụ site na nyocha a ha chọrọ ịnụ akụkọ gị na Ubuntu, ma ọ bụ nzaghachi ziri ezi ma ọ bụ nkụda mmụọ na ahụmịhe gara aga.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ dị ugbu a, ha chọrọ ịma ihe kpatara na otu i si eji Ubuntu, ihe ị na-achọghị banyere nsụgharị ndị dị ugbu a, yana ihe sistemụ na-efu. Have nwere ruo mgbe Jenụwarị 20, 2020 na- nyere Canonical aka Ubuntu kacha mma Linux distro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Canonical chọrọ enyemaka gị iji melite Ubuntu
Metaflow: Usoro Netflix maka igwe mmụta igwe